Supplemetary elections: Pụtanụ n'igwe taa tụọ vootu- Buhari - BBC News Ìgbò
Supplemetary elections: Pụtanụ n'igwe taa tụọ vootu- Buhari
23 Maachị 2019
Akụkọ ndị dị mkpa:
Pụtanụ n'igwe taa tụọ vootu- Buhari
Image copyright @bashirahmad
Nkenke aha onyonyo Muhammadu Buhari banyere n'ọkwa onyeisiala n'ọchịchị onyekwuoucheya nagba nke mbụ n'afọ 2015
Onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari akpọọla ụmụ Naijiria oku ka ha apụta n'igwe tụọ vootu na ntuliaka mmeju a ga-eme taa nampaghara ụfọdụ na steeti iri na asaa na Naijiria.
Buhari onye kwuru nke a n'abalị Fraide site n'ọnụ ọnụ na-ekwuru ya bụ Garuba Shehu, gọrọ agụgọ na o nweghị onye ya na-akwado iche na ntuliaka ahụ.
Image Copyright @NGRPresident @NGRPresident
Ihe anyị ejighị nye Okorocha asambodo mmeri-Inec
Inec ekwuola na ihe kpatara ha ejighị nye Rochas Okorocha, Gọvanọ Imo steeti asambodo mmeri na ntuliaka ọkwa senetọ na-anọchị Imo-West bụ n'ihi na onye nchikọta atụm vootu na mpaghara ahụ nyere ha ozi na a manyere ya amanye ịkpọpụta aha Okorocha dịka onye meriri na ntuliaka e mere .
Ọnụ na-ekwuru Inec bụ Festụs Okoye onye gbara nke a n'anwụ ụbọchị Friade na Markudị kwukwara na ihe yiri ya mere na ntuliaka Oju/Obi constituency dị na Benue steeti, Agaye na Niger nakwa n'Akwa-Ibom steeti.
Image copyright ALLEGHENY COUNTY JAIL/FACEBOOK
Nkenke aha onyonyo Michael Rosfeld (n'akpa ekpe) na Anton Rose
Enyela otu onye uweojii gbagburu otu nwata onye isi ojii mkpebi lawa -na-ikpe amaghị gị na mba Amerịka.
Michael Rosefeld onye gbagburu Anton Rose ka ọ na-agbara ya ọsọ kwuru na ya chere na nwata ahụ ji egbe mana O nweghị egbe a hụ®ụ n'aka nwata ahụ oge ọdachi ahụ mere nke butere ngaghariiwe oge ihe a mechara.
Argentina Vs Venezuela: 3-1
Nkenke aha onyonyo Lionel Messi gbara ọnyụpa n' asompi enyi na enyi Argentina na Venezuela
Lionel messi gbara ọnyụpa n' asompi enyi na enyi Argentina na Venezuela gbara ụbọchị Fraide ebe Venezuela jiri ọkpụ atọ chara ọkụ a satara otu gosi Argentina nkarị.
Ntuliaka obodo Naịjirịa nke 2019
Ikike diri mmadụ
Osun Election: Ụlọikpe enyela Adeleke mmeri
22 Maachị 2019
Imo elections: Mmegharị ntụliaka na steeti ahụ ebirila ọkụ
Election 2019: Gịnị bụdị inconclusive?
12 Maachị 2019
'Oke ịkwanye isi emeela m isi nkwọcha'
Kedu ebe Igbo si?
Man City egweriela ọkpụkpụ Man United ka Everton bọkachara ha